चीनबाट ल्याइएको कोरोना खोप क-कसले पाउँछन् ? - ePosttimes
Homeराष्ट्रियचीनबाट ल्याइएको कोरोना खोप क-कसले पाउँछन् ?
असार-२५, काठमाडौं । चीनबाट खरिद गरेर ल्याइएको कोरोनाविरुद्धको भेरोसेल खोप ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि ५५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लाई लगाउने योजना मन्त्रालयको छ ।